Kitra Analamanga -"LIGUE 1" :: Narodan’ny AS Adema ny Elgeco Plus, tompondaka farany • AoRaha
Kitra Analamanga -« LIGUE 1 » Narodan’ny AS Adema ny Elgeco Plus, tompondaka farany
Tapitra hatreo amin’ny dingan’ny ampahefa-dalana ny dian’ny Elgeco Plus, tompondakan’Analamanga farany. Tamin’ny alalan’ny isa tokana, baolina matin’i Michael Nathan, teo amin’ny minitra faha-17, no nandavo azy ireo teo amin’ny dingan’ny ampahefa-dalana ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga taranja baolina kitra, Diviziona voalohany na ny “Ligue 1”, omaly teny amin’ny kianjaben’i Mahamasina.
Ratsy fanombohana hatrany am-piandohan’ny fifaninanana ny tompondaka farany ary izao nihintsana nialoha izao. Vita kosa anefa ny valin’adin’ny ekipan’ny seranam-piaramanidin’i Madagasikara taorian’ireo faharesena nisesy nanjo azy ireo tamin’ny fifaninanam-pirenena. Ny lalao famaranan’ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara 2018 no nisian’izany farany.
Hihaona amin’ny ekipan’ny Mama FC, izay efa niondrika teo anatrehan’izy ireo tamin’ny dingan’ny fifanintsanana, ny ekipan’ny AS Adema amin’ny sabotsy ho avy izao mandritra ny manasa-dalana. Tamin’ny isa 1 noho 0 no nandresen’ny ekipan’ny trano fiantohana Mama ny ekipan’ny CF TFC tamin’ny sabotsy lasa teo, teo amin’ny ampahefa-dalana.
Ny ekipan’ny Cosfa sy Uscafoot kosa no hiatrika ny manasa-dalana iray, rehefa avy nanilika an’ireo mpifanandrina azy tamin’ny ampahefa-dalana avokoa. Tamin’ny isa 1 noho 0 no nandresen’ny ekipan’ny kaominina Antananarivo renivohitra ny ekipan’ny Fosa Juniors, raha tamin’ny isa 2 noho 0 kosa no nivoahan’ny miaramila ho mpandresy teo anoloan’ny Cnaps Sport avy eto Antananarivo.
Baolina lavalava – Lalao sakana Tsara filaharana ny STM sy ny USCAR
Baolina Kitra – Federasiona Hangarahara ny fifidianana filohan’ny FMF
Antenimierandoholona Nahemotra ny fifidianana ny lalàna momba ny fanoherana
Lomano Analamanga :: Nanjakazaka ny Managing sy Saint-Michel